Ifufe nke Spain: Tramontana, Levante na Poniente | Netwọk Mgbasa Ozi
Monica sanchez | | Nkewa, Meteorology
Ikuku. Ndị mmadụ anaghị enwekarị mmasị na ya, mana ọ dị mkpa ka osisi gbasaa, ka ụgbọ mmiri na-ebugharị, yana ihe ịtụnanya gbasara ihu igwe dị ka oke mmiri ozuzo ma ọ bụ oke ifufe. Taa a na-ejikwa ya isi iyi ike, ya mere, mkpa ọ dị naanị abawanye.
Spain bụ mba nwere oke okwu dị egwu. Oké Osimiri Atlantic na Oké Osimiri Mediterenian gbara ya gburugburu, ya mere ọtụtụ ụdị ikuku dị iche. Ndị kacha mara amara bụ Levante, Tramontana na Poniente. O doro anya na ị nụtụla banyere ha, mana Ànyị maara ihe njirimara ha bụ na otu ha si emetụta anyị?
1 Kedu ihe bụ ifufe na otu esi esi ewepụta ya?
2 Levante ikuku
3 Ifufe tramontana
4 Ifufe ọdịda anyanwụ
4.1 Mediterenian ọdịda anyanwụ
4.2 Atlantic ọdịda anyanwụ
Kedu ihe bụ ifufe na otu esi esi ewepụta ya?
Tupu ị banye n’isiokwu ahụ, ọ dị mkpa ịmata ihe ifufe bụ na otú e si emepụta ya. Ifufe bụ naanị otu ikuku ikuku nke na eme na ikuku n'ihi ntụgharị na ntụgharị nke ụwa.
A ghaghị ịgbakwunye nke a na radieshon nke anyanwụ abụghị otu n'ụwa niile, yabụ a na-emepụta ọdịiche nrụgide nke na-eme ka ikuku na-ekpo ọkụ, nke nwere ọchịchọ ịrị elu, na-ewepụ igwe ikuku na -emepụta ikuku. Dabere na ike ha, ha ga-ekwu maka ikuku, ifufe ma ọ bụ oke mmiri ozuzo.
Ngwaọrụ kachasị dị elu nke ị nwere ike iji tụọ ọsọ ikuku bụ anemometa, nke na-enyekwara anyị aka ịkọ ihu igwe.
Na Spain enwere ụdị ifufe 3 ndị kacha mara amara. Ka anyị lee njirimara nke ọ bụla n'ime ha.
Nke a bụ ikuku a na-amụ na etiti Mediterenian mana esịmde ọsọ ọsọ ya (100km / h) mgbe ọ na-agafe Strait nke Gibraltar. Ọ bụ maka eziokwu ahụ bụ na ụsọ oké osimiri Andalusia nke Atlantic nwere ihu igwe dị jụụ, na na ihu ọwụwa anyanwụ nke Oké Nkume nke Gibraltar mmiri ozuzo dị ịrịba ama.
Ọ na - eme n’ọnwa ọ bụla n’afọ, mana ọ na - adịkarị n’agbata Mee na Ọktọba. N'ihi ike ya, ọ bụ ihe a na-ahụkarị na ụgbọ mmiri enweghị ike ịhapụ ọdụ ụgbọ mmiri Tangier, Algeciras na Ceuta, ebe ọ bụ na Strait nke Gibraltar bụ ụdị olulu sitere n'okike na-emegide ngabiga nke ifufe. N'ihi ya, ndị Levante mụbaa ọsọ gị na-eme ka igodo ghara ikwe omume.
Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka okpomọkụ, ha dị elu, ọkachasị n'oge ọnwa ọkọchị mgbe ha debara aha n'etiti 35 na 42ºC n'ọtụtụ akụkụ Andalusia, dị ka Huelva ma ọ bụ Cádiz. Ma ọ bụ na mgbe Levante gafere n'akụkụ ọwụwa anyanwụ Andalusia, na-efunahụ mmiri na overheats mgbe ị ruru ọdịda anyanwụ, na-eme ka ihu igwe dị elu na-ebili.
Nke a bụ ikuku nke 'Amaara m n'onwe m'. Aha ya sitere na Latin, nke pụtara n'ofe ugwu. Ọ na-eme na northeast nke peninshula, n'etiti Balearic Islands na Catalonia. Ọ bụ ifufe oyi nke na-esi n’ebe ugwu na-agbago ọsọ ya na ndịda ọdịda anyanwụ nke Central Central France na Pyrenees. Ọ nwere ike iru streaks nke ruo Kilomita 200 kwa awa.
Na Mallorca anyị nwere Ugwu ugwu Tramontana (Tramontan na Majorcan), nke bụ ugwu dị n'etiti ugwu na ọdịda anyanwụ nke agwaetiti ahụ. Na Croatia, ọkachasị n'àgwàetiti Cres, a na-akpọ akụkụ ugwu ugwu nke agwaetiti ahụ 'tramontana'.
Ihu igwe dị ntakịrị karịa ndị ọzọ, ya mere flora na fauna dị nnọọ iche. Otu ihe atụ doro anya bụ na n'ọtụtụ ebe nke Sierra de Tramuntana, ebe ifufe na-efe karịa ike ya, anyị nwere ike ịchọta naanị maple dị iche iche bi na Balearic Islands: the Acer opalus 'Garnatense'. Osisi a na ebigbi naanị ebe di oke oyi, ntu oyi di -4ºC. Nanị ebe a na-edekọ okpomọkụ dị ala na agwaetiti a bụ na Sierra Leone.
Ihe dị iche iche nke ifufe a bụ na, mgbe ọ na-efe, elu-igwe na-abụkarị onye na-acha anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ muy Bonito.
Poniente si n’ebe ọdịda anyanwụ wee bia n’etiti peninshula. Na-agbapụ oké ifufe Atlantic na peninshula. Ọ bụ ikuku oyi na udu mmiri nke na-ahapụkarị ọdịda. Typesdị abụọ dị iche: ọdịda anyanwụ Mediterranean na Atlantic.
Mediterenian ọdịda anyanwụ
Nke a bụ ifufe na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ dịkwuo elu ma na-ebelata iru mmiri n'oge ọkọchị, ma na-eme ka Mercury na temometa na-ada n'oge oge oyi. Ya mere, Murcia nwere ọnọdụ okpomọkụ kachasị elu na mba ahụ: ọ bụghị ma ọ bụ ihe na-erughị ya 47'2ºC na June 4, 1994.
Atlantic ọdịda anyanwụ
Nke a bụ oke ikuku mmiri nke na-efe oyi site na Atlantic Ocean. Ọ naghị afụkarị ihe karịrị 50km / h na okpomọkụ anaghị agafe 30ºC ke ufọt ufọt awa n'oge okpomọkụ ụbọchị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụdị ifufe ọ bụla nwere njirimara ha. You maara ha?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Nkewa » Ifufe nke Spain: Tramontana, Levante na Poniente
Gini kpatara ikuku kacha ama ama na Spain?
Karịsịa n'ihi ugboro ole ha na ọkara ọsọ ha, ebe ọ bụ na ha na-afụ ọtụtụ ụbọchị kwa afọ yana oke ọsọ ọsọ, na mgbakwunye na ikpochapụ mpaghara ala dị iche iche. El Cierzo nwekwara ike ịgụnye n'etiti ndị a ma ama.
Nzaghachi nye ume0
Chaị! Amaghị m ihe ọ bụla gbasara isiokwu a. A kọwara nke ọma ✅. Daalụ maka ihe mmụta ahụ.
Obi dị anyị ụtọ na ị masịrị ya.
I meela nke ukwuu, ọ nyeere m aka nke ukwuu nyere aka belata ibu ma ghara iku ume